Nataon’ireo mpanao fihetsiketsehana ao Hong Kong ho fonenana vaovao mandritra ny areti-mifindra ny lalao an-tserasera · Global Voices teny Malagasy
Nahafahan'ny mpanao fihetsiketsehana nivory virtoaly ny 'Animal Crossing' an'ny Nintendo '
Voadika ny 11 Jona 2020 5:40 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Filipino, Ελληνικά, polski, Deutsch, русский, English
Sarin'ny ady lalao tao amin'ny Facebook-n'i Joshua Wong.
Nanomboka nihena noho ny valanaretina COVID-19 ny fihetsiketsehana manohitra ny governemanta notarihin'ireo tanora tany Hong Kong tamin'ny volana Janoary raha nahatratra hatramin'ny iray tapitrisa mahery ny vahoaka nidina an-dalambe tamin'ny fotoana nahabe azy indrindra.
Niato ireo sekoly sy oniversite izay lasa foiben'ny fihetsiketsehana raha nivoaka ny 28 Martsa ny Fandrarana ny Famoriana Olona noho ny Fanaraha-maso ny Aretina mametra ny isan'ny olona mivorivory tsy mihoatra ny efatra eny ankalamanjana.
Nanomboka teo dia nampiasa ny efijeriny ireo tanora fa tsy nidina an-dalambe ary nameno ny fotoanany malalaka tamin'ny lalao video an-tserasera.
Niavaka nandritra ny valanaretina ny lalao an-tserasera Animal Crossing satria nampiasa ity sehatra filalaovana ity ny mpanao fihetsiketsehana ao Hong Kong mba hanehoana ny fomba fijeriny ara-politika sy mba hamelombelomana hatrany ny saim-pihetsiketsehana.
Nivoaka tao amin'ny Nintendo Switch ny 20 Martsa 2020 ny lalao fampakana tahaka azy ao amin'ny fiaraha-monina.
Mamela ny mpilalao handositra ny nosy mitoka-monina iray izay hahafahan'izy ireo manorina trano sy zaridaina malalaka amin'ny alàlan'ny fampiasana ny loharanon-karena ao amin'ny nosy ny Animal Crossing. Ankoatra izany, afaka mampiantrano lanonana ny mpilalao ary manokatra ireo nosiny ho an'ny mpitsidika. Ahafahana mifampiresaka eo amin'ny samy mpilalao ihany koa ny lalao fampihatra lalao.
Tamin'ny faran'ny volana lasa teo, mpilalao maro no nivory tao amin'ny sehatra hanangana seho virtoaly izay nihiran'izy ireo ny hira fanevan'ny fihetsiketsehana – Voninahitra ho an'i Hong Kong.
Ity ambany ity ny fandraketana horonantsary tamin'ny sehatry ny lalao:
Nandritra izany fotoana izany i @studioincendo nizara ny nosin'ny mpilalao iray nanasana ny mpitsidika hikapokapoka ny sarin'ny Lehiben'ny Mpanatanteraka ao Hong Kong amin'ny maritoa:
Toy izao ny fandanian'ny vahoaka ao Hong Kong ny androny mandritra ny fihibohana coronavirus- manorotoro ireo ratsy fanahy ao amin'ny animal crossing, Carrie Lam ilay ratsy fanahy, ilay governora ratsy indrindra tamin'ny tantaran'i Hong Kong.
Nanambara i Joshua Wong, mpikatroka mpanohana ny demaokrasia malaza fa dingana vaovao amin'ny fihetsiketsehana ity lalao ity, izay tafavoaka velona tamin'ny famoretana miverimberina fa natsahatra fotsiny noho ny fepetra hiadiana amin'ny COVID-19.
Vetivety dia lasa fomba vaovao ho an'ny mpanao fihetsiketsehana ao Hong Kong hitolomana ho an'ny demokrasia ny Animal Crossing ! Nampitsahatra ny hetsi-bahoaka ny valanaretina Covid-19, nitondra ny olany tao amin'ny Animal Crossing ireo mpanao fihetsiketsehana noho izany.
Nesorina tao anaty tambajotra an-tserasera manerana an'i Shina ny Animal Crossing fotoana fohy taorian'ny siokan'i Joshua Wong tamin'ny 10 Aprily.
Ny mpanivana ao amin'ny tanibe no heverina fa ao ambadiky ny fanesorana ary nanameloka an'i Wong noho ilay fandrarana ireo mpilalao ao amin'ny tanibe. Nahasarika ny sain'ny gazety iraisam-pirenena ny zava-nitranga.
Raha anisan'ny tsy miala amin'ny fandraisana anjara amin'ny fanohizana ny tolona i Wong dia nanolotra fitsangatsanganana ho an'ny mpanao gazety nitety ireo tranonkala fanoherana isankarazany ao amin'ny sehatry ny lalao.
Mino izy fa mety ho lasa kianja vaovao mba hanairana ny sain'ny vahoaka mikasika ny fitsabahan'i Beijing ara-politika any Hong Kong ny sehatra amin'ny aterineto.
Maika ny hamerina ny tena zava-misy ireo Hong Kongers herintaona mahery taorian'ny niantombohan'ny fihetsiketsehana faobe nateraky ny volavolan-dalàn'ny fampodiana tao Shina.
Tamin'ny 18 Aprily, nohararaotina ny fihenan'ny herin'ny hetsi-panoherana ka nosamborin'ny polisy tany Hong Kong ny mpitarika ny fanoherana miisa 15 noho ny fiahiahiana azy ireo ho nikarakara sy nandray anjara tamin'ny fivoriambe tsy nahazoana alàlana izay hanoherana ny volavolan-dalanan'ny governemanta ao Hong Kong hanitsiana ny lalànan'ny fampodiana teo anelanelan'ny volana Aogositra sy Oktobra 2019.
Niteraka fihetsiketsehana madinika ilay fisamborana tany amin'ireo distrika lehibe fiantsenana tao anatin'ny roa herinandro lasa. Niampanga ireo mpanao fihetsiketsehana ny polisy ka nanambara ny Fandrarana ny Fivorian'olona.
Tamin'ny fanamarihan'ny tanàna ny 14 andro nifanesy tsy nisian'ny fifindran'aretina COVID-19 teo an-toerana dia heverina hanomboka indray ny fihetsiketsehana faobe ny volana Jona, rehefa foana ny fepetra fanaraha-maso ny aretina.